Ukudla okungu-Revolutionary okungenaku-60: isilwane esinempilo nokuhlanzeka, kuhlangene nezinhlobonhlobo zamamenyu.
Kuyini ukudla okungekho okungama-60 nokuthi yini engatholakala ngenxa yalokho
Ngesinye isikhathi u-Ekaterina Mirimanova wenza ukuzwa kwangempela kuma-dietetics. Iqiniso liwukuthi wakwazi ukunciphisa isisindo ngamakhilogremu angu-60 ngaphandle kokubonisana nomuntu onomsoco, kodwa ngokumisa imithetho yakhe yokudla, manje ebizwa ngokuthi ukudla okungapheli kuka-60. Ngokusemthethweni, kunzima ukumbiza ngokuthi ukudla. Umzimba awusabiswanga ngokuncipha okubukhali kokudla nokuhluka kwawo. Ngokusho kokudla kukaMirimanova, ungakwazi ngokuphelele konke, into esemqoka isesikhathini esifanele futhi inhlanganisela efanele.
Izimiso zesimiso sokunciphisa sinciphise 60
Umlobi wokudla uye wakha isifinyezo semithetho, esizozama ukukuhlaziya futhi sikusabalalise ezintweni. Ngakho kuyoba lula ukushintshela ohlelweni olusha, udle konke okuthandayo futhi ulahlekelwe isisindo ngesikhathi esifanayo.
Ukudla kokuqala. Ukudla kwasekuseni kuyimpoqo. Ngakho uzovusa umzimba wakho futhi uzoqala ukucubungula ama-khalori enentshiseko ekhethekile. Ekuseni ungadla noma yini. Ngisho namazambane othosiwe, ubhekeni, isinkwa esimhlophe futhi uphuze itiye noma ikhofi noshukela.
Ungazitholela nge-chocolate, kodwa kungcono ukuyeka izinhlobo zobisi. Uma ungeke ukwazi ukukwenza ngokushesha, kancane kancane uthenge ushokoledi ngokuqukethwe okwandayo kwe-cocoa. Okufanayo kusebenza noshukela. Kanciphisa kancane kancane umthamo futhi ngokushesha uzothola ukujwayela ukuphuza iziphuzo ngaphandle kokushukela nhlobo.
Ukudla akusho ukulahla ngokuphelele utshwala. Yebo, utshwala obunzima kumele kukhishwe, kodwa uma ngaphandle kwalo, khetha iwayini elibomvu elomile.
Zama ukudla ngesikhathi. Dinner kuze kube ngu-18.00 - ukubusa ngokuphelele okukhethwa kukho. Uma uhlala isikhathi sekwephuzile, khona-ke isidlo kufanele sibe sekwephuzile, kodwa namanje amahora ambalwa ngaphambi kokulala.
Amazambane kanye ne-pasta kungadliwa ngesikhathi sokudla kwasemini kuphela kanye nemifino noma ushizi. Kodwa ukuze uthole isidlo sasekuseni, ungalungisa i-pasta ku-Navy noma udle amazambane ahlambulukile nge-sausage.
Ngokuqondene nokusetshenziswa kwamanzi, ayikho inkomba ethile. Udinga ukuphuza okuningi, kodwa hhayi ngamandla. Umzimba wakho uzokutshela ukuthi uketshezi olunjani ngosuku.
Njengoba izitsha zangasese zisebenzisa okusanhlamvu noma ilayisi elinyanyisiwe (kungcono kunokujwayelekile).
Isidlo kufanele sibe lula. Kodwa uma ufuna ngempela inyama noma izilwane zasolwandle, khona-ke ngeke ukwazi ukufakwa ngezinye izinto.
Ngezansi amatafula ongawalayisha nokuphrinta ukuze akwazi ukuhlanganisa ngokufanele imikhiqizo.
Uma kunzima ukuthi uhlanganise imikhiqizo nsuku zonke, bese usebenzisa lawa amatafula ukudala imenyu kanyekanye inyanga yonke.
Umbono mayelana nokudla okungadluli 60
Kungase kubonakale ukuthi le ndlela yokulahlekelwa isisindo ayiphumeli ngokuphelele. Kodwa izimpendulo zezinkulungwane zabesifazane abaye bazame ukudla ngokuvumelana nalolu hlelo zifakazela okuphambene.
"Ekuqaleni ngangikwesaba ukukhathazeka kokudla. Ngaze ngacabanga ukuthi angingakulungeli ukucabanga okunjalo okusebenzayo ngalokho engangikudlayo. Kodwa empeleni konke kwakulula. Ngokuqinile futhi isikhathi eside ngangingakwazi ukulahlekelwa isisindo. Manje ngidla engikuthandayo, isisindo kancane kancane siyahamba futhi ngiyajabula nezinombolo ezilinganisweni kanye nokuqukethwe kwesiqandisini. "
"Ngiyazi, amadoda angavamile ukuhlala ezidlweni, kodwa kwakudingeka ngifanele. Uyanelisa konke, ikakhulukazi ukuba khona kwenyama nokunethezeka. Isikhathi esithile kuphela utshwala. Ngesizathu esithile ngididekile yiwayini elibomvu elomile, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngizolijwayela. "
"Ekuqaleni angizange ngibe nesisindo. Ngokuvamile. Ngathukuthele kakhulu. Kodwa nganquma ukuqhubeka, ngoba angizange ngibone izinguquko kwimenyu yami. Futhi ngokuhamba kwesikhathi ngathola imiphumela, ngakho-ke, amantombazane, ube nesineke. "
Izindawo zenkinga yesibalo sabantu besifazane, okuyinto enzima kakhulu ukuyijwayela
Izenzo zokuzivocavoca: isethi yokuzivocavoca
Ukwelapha ngokomzimba wokwelapha emuva
Indlela yokulala umama omncane
Indlela yokugeza imbiza yokushiswa?
Ukuziphindiselela nokungabi nabulungisa
Ukubonga izingane kanye nemithetho yokuziphatha kwabo
Ukujula kwe-premature kumadoda
Imikhuba yabazali bomkhwenyana emshadweni
Yimiphi inqubo yezinto eziphilayo ezivuselela i-vitamin C?
Ikhekhe le-Curd nge-peaches
Ukushisa ngokweqile kwesibeletho, izimbangela kanye nokwelashwa komfutho wegazi ophezulu
Ukuphakamisa i-Smas: izinkomba, isisekelo senqubo, umphumela
Gcoba kusuka ku-broccoli
Ukufundisa ukuthunyelwa kwamadoda